Izindaba - Yini i-valve yebhola
Ukuvela kwe-valve yebhola kwakungemva kweMpi Yezwe Yesibili. Yize ukwakhiwa kwe-valve yebhola kusukela ekuqaleni kwekhulu lama-20, leli patent lesakhiwo lehlulekile ukuqedela izinyathelo zalo zokuthengisa ngenxa yokulinganiselwa embonini yezinto zokwakha kanye nasembonini yokulungisa imishini. IDuPont e-United States yasungula ipulasitiki ephezulu ye-polytetrafluoroethylene (PTFE) kuze kube ngo-1943. Lolu hlobo lwezinto lunezinzuzo zokuqina okuqinile nokuqina, i-elastoplasticity ethile, izakhiwo ezinhle zokuzigcoba kanye nokumelana nokugqwala okuhle kakhulu, okufanele kakhulu uphawu impahla futhi kunokwethenjelwa kakhulu uphawu umphumela. Ngaphezu kwalokho, ibhola elinokuzungeza okuphezulu nokuqeda kahle indawo kungenziwa njengelungu lokuvalwa kwe-valve yebhola ngenxa yokuthuthukiswa kwemishini yokugaya ibhola. Uhlobo olusha lwe-valve olunokubhola okugcwele kanye no-90 ° ojikelezayo wokuhamba okungena ngaphakathi emakethe ye-valve, kudonsela ukunakwa okuningi. Imikhiqizo yama-valve yendabuko efana nama-stop valves, ama-valve esango, ama-plug valves namaveluvemvane ziyafakwa kancane kancane ngamaphayiphu ebhola, futhi ama-valves ebhola asetshenziswa kakhulu, kusuka kububanzi obuncane kuya kububanzi obukhulu, ingcindezi ephansi kuya kwengcindezi ephezulu, izinga lokushisa elijwayelekile ukuya ekushiseni okuphezulu, ukushisa okuphezulu kuya ekushiseni okuphansi. Njengamanje, ubukhulu obukhulu be-valve yebhola bufinyelele kuma-intshi angama-60, futhi izinga lokushisa eliphansi kakhulu lingafinyelela ku-liquid hydrogen lokushisa -254 ℃ .Izinga lokushisa eliphakeme kakhulu lingafinyelela kusuka ku-850 kuye ku-900 ℃. Konke lokhu kwenza amavalvu ebhola afanele zonke izinhlobo zemidiya, okuba uhlobo oluthembisayo kakhulu lwe-valve.
Amaphayiphu ebhola angahlukaniswa abe ama-valves ebhola elintantayo nama-valve we-trunnion ball asuselwa esakhiweni.
Amaphayiphu ebhola angahlukaniswa abe ngamavalvu wokungena phezulu kanye namavalvu wokungena ohlangothini. Ama-valve wokungena ohlangothini nawo angahlukaniswa abe ama-valves ebhola elilodwa, ama-valves ebhola lezingcezu ezimbili kanye nama-valve angama-piece amathathu ngokuya ngesakhiwo somzimba we-valve. Imizimba yama-valve eyizingcezu zebhola eyodwa ibalulekile; ama-valve amabili anezicucu aqukethe imizimba yama-valve emikhulu nemizimba yama-valve asizayo kanye nama-valve angama-piece amathathu akhiwa nomzimba owodwa we-valve oyinhloko nemizimba emibili yama-valve asizayo.
Amaphayiphu ebhola angahlukaniswa ngamaphayiphu ebhola wokuvala uphawu futhi avalwe kanzima ama-valves ebhola ngokusho kwempahla yokufaka uphawu kwe-valve. Izinto zokuvala uphawu zamaphayiphu ebhola wokufaka uphawu athambile yizinto eziphakeme ze-polymer ezifana ne-polytetrafluoroethylene (PTFE), iqiniswe i-polytetrafluoroethylene nenayiloni kanye nenjoloba. Izinto zokufaka uphawu lokuqina kokuqina kwebhola valve yinsimbi.